Zimbabwe Inonyorerana Chibvumirano cheBIPPA neSouth Korea
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vanoti dare remakurukota rakabvuma kuti Zimbabwe idyidzane ne South Korea pasi pechibvumirano che Bilateral Investment Protection Agreement, kana BIPPA.
Vachitaura nevatori venhau neMuvhuro mushure memusangano wavaita nechikwata chevemabhizmusi chekuSouth Korea, icho chiri kushanya munyika, VaTsvangirai vati dare remakurukota rakabvuma kuti Zimbabwe idyidzane neSouth Korea pasi peBIPPA.
Chibvumirano cheBIPPA chakasainwa kuSouth Korea muna Chivabvu pakashanya VaTsvangirai kunyika iyi vaine gurukota rezvehunyanzvi, VaHeneri Dzinotyiwei, avo vakasaina chibvumirano ichi.
Asi VaMugabe vakamboramba kucherechedza chibvumirano ichi. Munyori webazi rekuburitswa kwemashoko, VaGeorge Charamba, vakatiwo VaTsvangirai vaiva vasina masimba pasi pemitemo yenyika yekuti vabvumidze VaDzinotyiwei kusaina chibvumirano cheBIPPA ichi.
VaCharamba vakati VaTsvangirai havaigona kuti Va Dzinotyiwei vasaine chibvumirano ichi vasina kupihwa mvumo naVaMugabe uye vasina kupihwa mvumo nedare remakurukota.
Asi VaTsvangirai vati zvichitevera danho rakatorwa nedare remakurukota rekutambira chibvumirano ichi, kwangosara chete kuti chibvumirano ichi chinotaurwa nezvacho mudare reparamende.
Zvichakadai, chikwata chevemabhizimusi chiri kushanya muZimbabwe chinoti chiri kutsvaga mikana yekusima mari munyika zvikuru munyaya dzekucherwa kwesimbi pamwe nezvemhando dzemoto.
Mutungamiri wechikwata, ichi uye vari mutevedzeri wegurukota rezvekutengeserana kwemhando dzemoto ku South Korea, VaPark Young June, avo vataura vachiturikirwa, vaudza vatori venhau kuti chikwata chavo chakazvipira kusima mari yacho muZimbabwe kana chikawana mikana yakanaka.
Chikwata cheku South Korea ichi chakatarisirwa kuita misangano naVaMugabe, mapazi ehurumende pamwe nemakambani ari munyaya dzekucherwa kwesimbi pamwe nezvemhando dzemoto.